चीन थ्रीडी एम्बोसर्ड यूवी प्रतिरोध कम्पोजिट डब्ल्यूपीसी डेकिंग निर्माणकर्ता र आपूर्तिकर्ता लहुआ
उत्पाद स्वामित्व: WPC Decking
बस्तु संख्या: 3DLS146H23B
भुक्तानी: TT / LC
मूल्य: $ २.77 / एम
रंग: सागौन, ब्राउन, चकलेट, देवदार, चारकोल, आदि
शिपिंग पोर्ट: शंघाई पोर्ट
नेतृत्व समय: १०-२२ दिन
२ 00०० ग्राम / एम
२.4 मीटर, २.9मीटर, 6.6 मी, वा अनुकूलित
पार्क, ल्यान्डस्केप, पानी पार्क
● WPC decking मुख्य सामग्री PE, काठ फाइबर र additives.Our हो WPC decking हामी प्रकृति सामग्री को उपयोग को रूप मा सबै दुनिया मा लोकप्रिय छ।
● हाम्रो डब्ल्यूपीसी डेकिंग सुन्दर र सुरुचिपूर्ण प्रकृति काठको अन्न बनावट छ, सजिलो स्थापनाको साथ छुनुहोस्, यसैले ग्राहकहरूको बिभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ। यो शेभ, नेल, ड्रिल र काट्न सकिन्छ बिभिन्न स्पेसिफिकेशन्सको सामानहरू फिट गर्न, जस्तै परिदृश्य, बाहिरी बगैंचा, पार्क, सुपरमार्केट, आदि।
। हाम्रो डब्ल्यूपीसी डेकिंग वातावरणीय मैत्री, पूर्ण रीसायकल योग्य र अरू कुनै खतरनाक रसायनिक छैन, यसलाई चित्रकलाको आवश्यक पर्दैन, कुनै गोंद र कम मर्मतको आवश्यकता छैन।
● हाम्रो डेकिंगमा राम्रो मौसम क्षमता छ, यो -40० ℃ देखि + ℃० ℃ मा उपयुक्त हुन सक्छ। हाम्रो डब्ल्यूपीसी डेकिंग सबै विश्वमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो बोर्ड मौसम प्रतिरोधी, एन्टी-पर्ची, केहि क्र्याक्स, तान्न, ना bare्गो पैर मैत्री छ । प्लस यूवी योजक हाम्रो बोर्ड यूवी प्रतिरोध, फीड प्रतिरोधी र टिकाऊ बनाउन। नमी र तापमान बिरूद्ध राम्रो आयाम स्थिरता।
झुकाव क्षमता: २.4..4 MPa मोडुलस elasiticity: 69 69 69 MP
अघिल्लो: आउटडोर नो क्र्याक र ताना काठको प्लास्टिक WPC सजावट
अर्को: सजावटी काठ WPC बाहिरी लागि सजावट
प्रश्न: तपाईंको कम्पनीको आपूर्तिकर्ताको मानक के हो?
Q: तपाईंको मोल्ड सामान्य रूपमा कहिलेसम्म काम गर्दछ? दैनिक कसरी कायम गर्ने? मरेको प्रत्येक सेटको क्षमता के हो?
कारीगरले सूत्र तयार गर्दछ र नमूना बनाउँदछ र रंग पुष्टि गर्न र ग्राहक संग उपचार पछि
त्यसपछि दाना तयार पार्नुहोस् (सामग्री तयार गर्नुहोस्), त्यसपछि निर्माण सुरु हुन्छ, एक्सट्रुसन उत्पादहरू तोकिएको स्थानमा राखिन्छ, पछि हामी उपचार पछि गर्नेछौं, त्यसपछि हामी यी प्याकेज गर्दछौं।
प्रश्न: तपाइँको उत्पादनहरूको सामान्य डेलिभरी समय कति हो?
Q: तपाईंसँग न्यूनतम अर्डर मात्रा छ? यदि हो भने, न्यूनतम अर्डर मात्रा कति हो?
Q: तपाइँको उत्पादन उपज के हो? यो कसरी प्राप्त भयो?
प्रश्न: WPC उत्पादनहरूको सेवा जीवनकाल कति लामो हुन्छ?
प्रश्न: कुन भुक्तानी अवधि तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ?
Q: काठसंग तुलना गर्दा, WPC उत्पादनको फाइदा के छ?
Q: WPC उत्पादनहरूलाई चित्रकला चाहिन्छ? तपाइँ कुन रंग प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
3D WPC सजावट
कम्पोजिट डब्ल्यूपीसी डेकिंग
यूवी प्रतिरोध WPC सजावट
आउटडोर डीप एम्बोस गरिएको यूवी प्रतिरोधी कम्पोजिट डब्ल्यूपी ...
आउटडोर एन्टी-पर्ची गहरी अनाज कम्पासित समग्र ...
काठ प्लास्टिक कम्पोजिट डेकिंग, डब्ल्यूपीसी कम्पोजिट डेकिंग, WPC आउटडोर डेकिंग, आउटडोर डब्ल्यूपीसी डेकिंग, WPC फर्श, WPC सजावट भुइँ,